Ny ora misy masoandro ihany no marihiko
"Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra." Salamo 103:2
"Ny famindrampon’i Jehovah no hambarako, dia ny fiderana an’i Jehovah araka izay rehetra nataony tamintsika." Isaia 63:7
Ny “famantaranandro aloka” (na dialy: cadran solaire) dia taho lavalava atsatoka amina velarana voalamina mahitsy. Rehefa mamiratra ny masoandro, dia fantatra amin’ny alok’ilay taho ny ora; fa rehefa maloka kosa ny andro, dia tsy misy na inona na inona hita. Ny lohatenin’ity pejy ity dia nosoratana mpanao taozavatra kristiana iray fahiny, teo ambonin’ny famantaranandro aloka, teo amin’ny rindrina. Tsy ny hilaza izay efa mibaribary fotsiny no fikasany tamin’izany. Taominy koa isika hisaintsaina izay zavatra mba tsarovantsika, eo amin’ny fiainantsika.
Angamba isika manana fironana tsy hijery afa-tsy ny andro sarotra. Ny fontsika, araka ny maha olombelona antsika, dia tsy mahay mankasitraka; ary kinga ery isika hanadino ireo zava-tsoa atolotr’Andriamanitra isanandro isanandro. Rehefa mivadibadika eny ny fotoana, dia mety ho tafalentika ao anaty alahelo lalina isika, ary na ilay fifaliana noho ny fahalalana ny Tompo Jesosy aza, dia mety ho very mihitsy. Ry kristiana ô, aoka isika tsy hanaiky ho azon’ny hakiviana sy ny fangidiana, aoka tsy hanadino ireo fotoana nisy masoandro nihiratra. Ary amin’ny ora manjombona dia tadidio izao tononkira izao : Raha tonga manamaloka ny lanitra manga.
Ny tafio-drivotra mifofofofo,
Dia aza mitanondrika,
Fa isao ireo zava-tsoa nomen’Andriamanitra!
Isaory àry, isaory tsy an-kiato
Ilay Ray mandrotsaka aminao,
Isanandro isanandro, ny harenan’
Ny fitiavany mahagaga.
Isao ireo zava-tsoa nomen’Andriamanitra,
Ataovy eo anatrehanao daholo;
Dia ho hitanao ny hamaroany
Ka hitsaoka Azy ianao!